विजय सापकोटा शनिवार, असार ३१, २०७४ 12890 पटक पढिएको
यी सब पढ्न र सुन्न सकिने थिए । तैपनि निकोला सानो आवाजमा त्यसलाई सजिलो गरी व्याख्या गरिरहेकी थिइन् जसले गर्दा म भित्तामा लेखिएका विषयवस्तु पढ्नभन्दा उनकै कुरा सुन्नमा बढी केन्द्रित हुन थालेँ ।
सुरुङजस्तो ठूलो सोतोबाट भित्र गएपछि दोस्रो विश्वयुद्धपूर्वको जर्मनीसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू देखिए । नाजीहरूका पोसाक, पार्टी सदस्यता, दस्तावेजहरूको क्रमसँग यहुदीविरोधी सामग्रीहरू प्रशस्तै देखिए । हलोकास्टका काला दिनहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्ने सामग्रीहरू पनि देखिए ।
खासै भीड थिएन । हामी दुई मज्जैले गफिँदै थियौँ र निकोला हिटलरको उदयपूर्व र उदयपश्चात्को इतिहास क्रमबद्ध सुनाइरहेकी थिइन् । यसले मलाई प्रदर्शनीलाई बुझ्न निकै सहज बनाएको थियो ।
हिटलर र उसको नाजी शासनमा अनुपयोगी बताउँदै अपांग, अशक्त र वृद्ध जर्मनहरूलाई समेत मारियो । उनीहरूलाई मार्नकै लागि ६ वटा केन्द्रहरू बनाइए जहाँ हावा नछिर्ने गरी सिल गरिएको कोठाभित्र कार्बनडाइअक्साइड ग्यास छिराएर मारिन्थ्यो । त्यतिबेलाको अस्पतालको एउटा बेडको नमुना म्युजियममा राखिएको थियो ।
सन् १९३९ मा जर्मनले आधा पोल्यान्डमाथि कब्जा जमाएपछि त्यहाँ र आसपास हँगेरी, चेकोस्लोभाकिया, रोमानिया, युक्रेन आदि जस्ता देशका यहुदीहरूलाई अरू जनसंख्याबाट अलग्याउन घर छोड्न विवश गराइयो । एउटा सानो भूभागमा नियन्त्रण गरेर राखियो । एक हिसाबले नजरबन्दजस्तो । यसलाई गेटो भनिन्थ्यो । कुपोषण र रोगका कारणले गेटोमा धेरै यहुदीहरू मर्ने गर्थे र बाँचेकाहरूलाई दैनिकरूपमा डेपोर्टेसन अर्थात् निर्वासनको नाम दिएर क्याम्पहरूमा लगेर राखिन्थ्यो । क्याम्पमा लगेकाहरू कतिलाई गोली ठोकेर मारिन्थ्यो, कतिलाई झुन्ड्याएर । केटाकेटीलाई जिउँदै जलाइन्थ्यो । बलियाहरूलाई बन्दी बनाई काममा लगाइन्थ्यो ।
अशक्त, वृद्ध, केटाकेटीलाई डेथ फ्याक्ट्रीतिर लगिन्थ्यो । ती ग्यासच्याम्बरमा मारिन्थे । कतिलाई चिहान खन्न लगाएर चिहानमाथि गोली ठोकिन्थ्यो । कति क्याम्पमा कथित नाजी डाक्टरका बहुलठ्ठीपूर्ण प्रयोग गर्ने क्रममै मारिन्थे । भोक र रोगले मर्नेहरूको संख्या लाखौंको थियो । त्यो बीभत्सता देखाउने फोटोहरू देख्दा इतिहासलाई धिक्कार्न मन लागिरहेको थियो ।
बाँच्न सफल भाग्यमानीमा उनी पनि परिन् । विश्वयुद्धको समाप्तिपछि बेलायतमा शरणार्थी बनी पसेकी उनकी आमा ९७ वर्षसम्म त बाँचिन्, तर निकोलाका अनुसार जीवनको अन्तिम क्षणसम्म पनि त्यही त्रासदीको छायामै बाँचिरहिन् । रेल, घन्टी, यात्रा, क्याम्प, आगो आदिजस्ता शब्द मात्रैले पनि उनलाई तर्साइरहन्थे रे । उनी रेलमा यात्रा गर्नै मान्दिनथिन् रे ।
म त्यहाँ राखिएका चिठीका अक्षरहरू हेरिरहेको थिएँ, तर त्योभन्दा बढी निकोलालाई हेरिरहेथेँ । केहीबेरमा उनी मतिर आइन् र मसिनो स्वरमा भनिन्, 'आमालाई सम्झिएँ ।'
'सरी' मैले भने ।
उनले लामो सास फेरेर हलुंगिएझैँ साबिकको आवाजमा भनिन् 'अब हामी अस्विज जाँदैछौ, पृथ्वीको नरक ।'
नाजी शासनको सबैभन्दा कुख्यात कन्सन्टे«सन क्याम्प 'अस्विज' सबैभन्दा पहिले राजनीतिक बन्दीहरू थुन्न बनाइएको थियो । पछि यसलाई डेथ क्याम्पमा बदलियो जहाँ एघार लाखभन्दा बढी मानिसहरू मारिए । मन्द उज्यालो छरिएको यो कोठामा अस्विज क्याम्पको जीवन्त मोडेल राखिएको थियो ठ्याक्कै भिडियो र फोटोमा देखेजस्तै । सेताम्मे छ मोडेल । यसको रङ सेतो हुनुको पनि केही अर्थ छ कि भन्ने खुल्दुली जागे पनि निकोलालाई सोध्न मन लाग्दैन । अस्विजको डेथ फ्याक्ट्रीसम्म पुग्ने गरी गएको रेलको ट्रयाकमा तीनवटा ट्रेन देखिन्छन्, दुईवटा भर्खर आएको एउटा आउँदै गरेको । साना पोका र सुटकेस बोकेका मानिसका आकृतिहरू, जर्मन गार्ड र अफिसरहरू, ट्रेनबाट झर्दै गरेका मानिसहरू, टे«नबाट घँचेटिँदै गरेका अशक्तहरू, डोहोर्‍याइएका बच्चाहरू, सामानहरू समेट्दै गरेका बन्दीहरू, पर देखिने चिम्नी जहाँ हरबखत नरधूप पुत्पुताइरहन्छ...नियालेर हेर्छु निकैबेर । यी जीवन्त जस्तै लाग्छन् ।
मर्नका लागि लामबद्ध मानिसहरू ... उफ् ! मान्छेको जीवनमा यो भन्दा अरू त्रासदी के होला ? चक्कर आउँछ मलाई । पछाडि फर्किएर थचक्क बस्छु । भित्तामा टाँसिएका स्पिकरमा त्यो नरसंहारबाट उम्कन सफल भाग्यमानीहरूले सुनाइरहेछन् बाँचेका कथा । निकोला पनि दोस्रो मेचमा आएर बस्छिन् ।
हामी मौन छौं । म्लान्त उज्यालो पोखिएको त्यो कोठा शोकमग्न छ, खालि स्पिकरहरू बोलिरहेछन् ।
त्यो मोडेलको छेउमा फोटाहरू छापिएका छन् । ती फोटाहरूले त्यो समयलाई बोलिरहेका छन् । त्यसलाई थप पुष्टि गर्न तथ्यहरू लेखिएका पनि छन् । म आफूलाई अत्यन्तै थाकेजस्तो महसुस गरिरहेछु ।
म थाकिसकेको थिएँ । तर मेरा हातगोडा थाकेका थिए या मस्तिष्कमात्रै, यो बुझिरहेको थिइनँ । मैले दबिएको स्वरमा भनेँ 'युद्धको यति पासविक उन्माद देखिसकेपछि मलाई मानिसका युद्धका, पराक्रमका कथाहरू सुनिराख्न मन छैन निकोला । म वास्तवमै दुःखी छु ।'
'धन्यवाद', निकोलाले मेरो हात बलियोसित समातेर भनिन् 'मानवताप्रतिको तिम्रो विश्वासलाई म कदर गर्छु ।'
त्यतिबेला म भने सम्झिरहेको थिएँ, पादरी मार्टिन निमोलरको प्रसिद्ध अर्थपूर्ण उक्ति ः
तिनीहरू पहिले कम्युनिस्टका लागि आए
म बोलिनँ, किनभने म कम्युनिस्ट थिइनँ,
त्यसपछि तिनीहरू ट्रेड युनियनकर्मीका लागि आए
म बोलिनँ, किनभने म ट्रेड युनियनकर्मी थिइनँ
त्यसपछि तिनीहरू यहुदीहरूका लागि आए
म बोलिनँ किनभने म यहुदी थिइनँ
अन्त्यमा तिनीहरू मेरा लागि आए
र त्यहाँ मेरा लागि बोलिदिने कोही पनि बाँकी थिएन ।'
मधेसी नेताद्वारा बलिदानीको बेवास्ता 241
धनकुटामा 'निषेधाज्ञा' र 'आमहड्ताल' जारी 924
गुड्दैन फूलमायाको रिक्सा 322
विराटनगरमा व्यवसायीमाथि साङ्घातिक आक्रमण 1029